DHEGEYSO-Xaasaska Alshabab oo lagu amray inay mudo kooban uga baxaan Baardheere. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Xaasaska Alshabab oo lagu amray inay mudo kooban uga baxaan Baardheere.
Oktoobar 17, 2016 2:26 b 0
Baardheere, Oct 17 2016–Maamulka degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa soo saaray amar ah in xaaasaska iyo carauusrta madaxda AL-Shabaab ay iskaga baxaan Baardheere iyo nawaaxigeeda toddobaad gudihiis.
Taliya saldhiga degmada Baardheere Guhaad Maxmauud Maclin Cumar ayaa Radio Daljir waraysi uu siiyay ku sheegay in xaasaska Al-Shabaab ay yihiin kuwa u basaaasa Ragooda isla markaana ay cadayn ay u hayaan arintaas .
Wuxuu intaas ku daray in amarka Al-shabaab xaasaskooda looga saarayo magaalada ay gaareen Maamulka Jubba-Land iyo kan degmada Baardheere
Zubeyr Shiikh Cabdi oo kusugan Daljir Galkacyo ayuu u waramay
DHEGEYSO-Wasiirka shaqada shaqaalaha iyo dhalinyarada oo kahadlay waxqabadkiisa.
DHEGEYSO-Carwooyinka casriga ah oo kusoo badanaya magaalada Qardho.